आराम र यात्रा - iSearch
अन्तमा यो सामान्य छुट्टीको सिजन हो। दैनिक जीवनबाट ब्रेक गर्न र आफ्नो ब्याट्री रिचार्ज गर्न केवल वयस्कहरूको लागि मात्र महत्वपूर्ण छैन। बालबालिकालाई पनि बालबालिका र स्कूलबाट ब्रेक चाहिन्छ। प्रायः सबै रूचिहरु लाई सम्बोधन गर्न सजिलो छैन र छुट्टीको गन्तव्य खोज्न सजिलो हुन्छ जुन हरेक परिवारको सदस्यको व्यक्तिगत स्तरको विश्राम र गतिविधि प्रदान गर्दछ। तर सानो योजनाको साथ, हरेक परिवारको छुट्टी वर्षको सबैभन्दा सुन्दर समय बन्छ।
उपयुक्त परिवहनको छनौट
निर्णय सूचीको शीर्षमा यातायातको उचित साधनको प्रश्न हुनुपर्छ। कार धेरै सामान संग यात्रा गर्न र समय को समयमा लचीला हुन को लागि अनावश्यक फायदे छ। यो विशेष गरी जब साना बच्चाहरु संग यात्रा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं धेरै समय र धेरै धेरै ब्रेक प्लान हुनुपर्छ - अधिमानतः ठूलो बाहिरी क्षेत्रहरूमा, जुन खेल मैदान छ। यसले लामो बैठकको लागि इष्टतम सन्तुलन बनाउँछ। वैसे, धेरै आमाबाबुले रातमा छुट्टीमा जान्ने निर्णय गरे किनभने तिनीहरू रमाइलो सवारीको आशा गर्छन्। तथापि, विशेषतया लामो दूरीमा, तपाईले सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ कि तपाइँसँग यात्रा गर्नु अघि तपाईको लागि पर्याप्त नींद माग्न आवश्यक अनुशासन छ। आखिर, उत्साहित बच्चाहरु साँझ साँझमा बिस्तारै लाग्न गाह्रो हुन्छन् र अन्त्यमा प्याकेङसँग व्यस्त हुन्छन् जुन निश्चित रूपमा रातको सवारीको लागि उपयुक्त हुँदैन! यसैले, तपाई सरुको सुत्न सुत्न सुरू गर्नु पर्दछ र छुट्टीमा फर्किनु पर्छ।
अर्को परिवार-अनुकूल यात्रा विकल्प ड्यूश बहर हो। चूंकि आईसीई ट्रिन्सहरु शिशुहरु को खेत को लागि पर्याप्त स्थान संग खेलिन्छ, उनि परिवार यात्रा को लागि आदर्श हुन्छन्। विन्डोबाट दृश्य, भोजन कारको भ्रमण वा यसको साथ लिइएका खिलौनेहरू शुरुवात सम्म विश्रामबाट बच्चाहरु यात्रा गर्न पर्याप्त विविधता प्रदान गर्छन्। यदि तपाईं धेरै पटक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने यो केवल समाप्त हुनेछ। त्यसैले, बुकिंग गर्नु अघि सटीक यात्रा योजना को अध्ययन गर्न को लागी उचित छ!
यदि तपाइँ उडान विरुद्ध निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईले यात्रा गर्नु अघि बच्चा स्वस्थ हुनुहुन्छ। घाँटी, नाक वा कान संक्रमणको साथ एक उडान अत्यन्तै पीडा हुन सक्छ। चढ्ने वा मूलको समयमा दबाबको उलटका लागि क्षतिपूर्ति गर्न, नाकले टाढा र भूमि लिन मद्दत गर्दछ। तर पनि नयाँ कानप्लगहरू जसले दबाब, उपचारलाई सन्तुलन गर्दछ। शिशुहरू, अर्कोतर्फ, प्यानिफायर वा प्यासिफायरहरूको लागि सबैभन्दा प्रभावशाली मद्दत हो। यदि यो बाधा लिइन्छ भने, वायु यात्राको लागि एक रोमाञ्चक र मनोरञ्जन अनुभव वादा गरिएको छ, विशेष गरी बच्चाहरुको लागि। गतिको सीमित दायराको कारण, बच्चाहरूका लागि लगभग तीन घण्टाको अधिकतम उडान समय सिफारिस गरिन्छ।
यात्राको लागी के गर्ने?
विशेष गरी लामो कार भ्रमणका साथ, यात्रा बिमारी प्रायः विशेष गरी पुरानो बच्चाहरु मा सेट गर्दछ। यसबाट बच्नको लागि, ड्राइभ गर्दा किताबहरू र कम्प्यूटर गेमहरू टाढा पर्दछ। कष्टप्रद उल्टो यात्रा बुलबुम को लागि एक तेज र प्रभावी उपाय को रूप मा साबित गरेको छ। यसको अतिरिक्त, एक्यूप्रेचर बेल्ट हालैमा उपलब्ध भएको छ। तिनीहरूसँग कुनै पनि सक्रिय अवयव समावेश छैन र विशेष एक्यूप्रेचर पोइन्टहरूमा हल्का दबाब लागू गरेर विशेष रूपमा काम गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई साना बच्चाहरूको लागि पनि उपयुक्त बनाउँछ।
बच्चाहरु संग परिवारहरुको लागि उत्तम छुट्टी स्थलहरु
चाहे समुद्र तट र समुद्र, पर्वत वा खेती - गंतव्य को विकल्प मा तपाईंले चुपचाप आफ्नो बच्चाहरु लाई समावेश गर्नु पर्छ। विशेष गरी छुट्टीमा स्वभाव प्रायः एक आत्म-भाग हो, किनकि केटाकेटीहरू उनीहरूको हृदयको सामग्रीमा रङ्ग गर्न सक्छन् र उनीहरूको वरिपरि पत्ता लगाउँछन्। तर होइन सबैको लागि, छुट्टी बिना कल्याण वा मनोरञ्जनको लागि सांस्कृतिक योग्यता। त्यसपछि यो एक सम्झौता पत्ता लगाउन उत्तम छ। पारिवारिक होटेलमा छुट्टिहरु यस मामला मा एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। यसले बच्चाहरूलाई विभिन्न रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, जबकि आमाबाबुले आफैंको लागि समय छ। त्यसपछि संयुक्त यात्रा पारिवारिक अनुभव बन्छ। जो व्यक्तिले आफ्नो छुट्टीको लागि निश्चित भोजन समयबाट अधिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता चाहानुहुन्छ छुट्टै घरमा बस्न विचार गर्नुपर्छ। यहां सम्म कि क्याम्पसाइटहरूले आज केहि सान्त्वना प्रदान गर्दछ र तम्बू र मोबाइल घरहरू सँगसँगै प्राय: पनि कोटहरू छन्।
सफल छुट्टिहरु को लागि तपाईंलाई दूर यात्रा छैन। महोत्सवको छुट्टी मूड पनि एक केन्द्र पार्क वा छुट्टी पार्क धेरै नजिक पुग्छ। र पशु वा मनोरञ्जन पार्कहरूमा पनि दिन यात्राहरू छुट्टीको सिजनमा अनुभव गर्दछ। सामान्यतया, यदि बच्चाहरु मजा छ र व्यस्त छ भने, छुट्टी पनि आमाबाबुको लागि मनोरञ्जनको लागि पनि छ!
कुन रमाइलो तपाइँ र तपाईंको परिवारलाई सजिलो पार्नुहोस्! हाम्रो गाइडले तपाईंलाई लापरवाही छुट्टीको मौसमको लागि बहुमूल्य सुझाव दिन्छ!
222,407प्रशंसकमलाई यो मनपर्‍यो